Fiji: Inona no tian’ny fanjakana atao amin’ny Rano FIJI? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2010 4:50 GMT
Nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao i Ratu Ganilau fa niala an-tsitrapo izy ary tsy miombon-kevitra amin'ny fanjakana mikasika ny momba an'i David Roth. Kanefa tsy nila ankoatra izay izy.
Nanomboka natao tao anaty tavoahangy ny rano FIJI tamin'ny taona 1996 tany amin'ny lemak'i Yaqara any avaratr'i Viti Levu, nosy lehibe indrindra sady be mponina indrindra any Fidji. Herintaona taty aoriana, naondrana tany Etazonia ny rano (marika faharoa be mpividy indrindra any Etazonia aorian'ny Evian). Ankehitriny, efa manana ny mpankafy azy ny FIJI, ary afa-po, satria efa hita any amin'ny firenena 40 hafa koa ity rano ity. Araka ny tarehimarika navoakan'ny orinasa, ny rano Fiji dia mampiditra 20% amin'ny vola azo avy amin'ny fanondranana entana any an-toerana ary mampiasa olona 350.
Gazety aostraliana iray no manombatombana fa angamba noroahan'ny miaramila i David Roth hahafahan'izy ireo mampiditra olona teratany hitondra ny orinasa, na koa angamba handray ny fitantanana ny loharano hampiasain'ny orinasa.
Hatreto aloha, mbola tsy fantatra marina ny tena nandroahana an'i David Roth. Tsy fantatra toy izany koa izay mety hataon'ny fanjakana. TheMax, mpaneho hevitra ao amin'ny bilaogy Coup 4.5, nilaza tamin'ny rehetra ny tsy tokony hikorontanana.
Raha tena noroahina i David Roth, hoy Alohabula1 manoratra ao amin'ny Fiji Board Exiles, dia nanao fahadisoana goavana ny fanjakana manoloana ny lafiny fifandraisana.
Mera Fiji Mahan, maneho hevitra ao amin'ny Fiji Democracy Now Blog fa tokony hanome betsaka ho an'ny tany mampiantrano azy ny mpampiasa vola vahiny.
Mpaneho hevitra iray tsy mitonona anarana ao amin'ny Fiji: The Way it Was, IS and Can Be miombon-kevitra amin'ny hoe ataon'ny orinasa amin'izay tiany hanaovana azy ny fanjakana.